Chrome 94 inosvika neWebhuCodecs API yakaitwa zviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Angangoita maviri marudzi ekuvandudza anogona kuitwa kune ese marudzi software. Rimwe remabasa matsva kana ekuona tweaks ndidzo dzinokwezva kutarisisa, asi iwe unogona zvakare kugadzirisa izvo zvisingaonekwe kuitira kuti ruzivo rwevashandisi ruwedzere. Ndiyo poindi Google painoratidzika kunge iine browser yayo, kubvira, mushure v93 zvimwe chete, nezuro yakakanda Chrome 94 neshanduko dzisingaonekwe. Kana zvakanaka, muchidimbu.
Uye ndeyekuti pakati pezvakakurumbira zvezvakauya pamwe chete neChannel 94 yatinayo kuvandudzwa muchikamu chemifananidzo, asi iwo haasi dhizaini yekugadzirisa, saka kuona kutaridzika, asi kunowedzera kwekunzwa. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kushambadza nhau dzakasvika pamwechete ne94th vhezheni yeGoogle browser.
Chrome 94 inosimbisa
WebGPU yave kuwanikwa kuyedza. Iyo imwe nzira kune WebGL, uye inobvumidza mepu kuVulkan, Direct3D kana Metal zvichienderana nepuratifomu. WebGPU yakagadzirirwa kusimudzira yemazuva ano grafiki ruzivo.
WebCodecs yave kuwanikwa zviri pamutemo.
Iye zvino kanivhasi karavara manejimendi yakagadziriswa.
Mutemo mutsva weiyo skrini yekutora ficha yeiyo Screen Capture kududzirwa.
Inactivity Detection API yakawedzerwa kuti igone kuziva kana mushandisi asiri kuwirirana nesystem.
Chrome 94 ikozvino iripo kurodha pasi kubva kune yako website yepamutemo. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vano dhawunirodha mapakeji ekugovera kwedu, chero bedzi zvichikwanisika. Haisi yakavhurika sosi bhurawuza, saka haiwanzo kuwanikwa mumahofisi epamutemo eese Linux-based system. Hongu zviripo, semuenzaniso, muAUR, iyo Arch Linux nharaunda repository, saka inogona kuiswa ne yay kana chimwe chishandiso chine graphical interface senge Pamac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 94 inosvika neWebhuCodecs API yakaitwa zviri pamutemo pamwe nekumwe kugadziridzwa kwemifananidzo
ovpn-dco, kernel module yekumhanyisa OpenVPN kuita